g15 01-OA - Akamaihd.net - PDF Free Download
g15 01-OA - Akamaihd.net
A MA J J II-BIT OOT ESSA 2015
M AX X ANSA KANA KEESSATTI
I NTAR NEETI I I R R AT T I www.jw.org
M ATA D U R E E F U U L A J A L Q A B A A
DA R G AG G O OTA
r Kanneen armaan gadii dabalatee, deebii Macaafni Qulqulluun gaaﬃiwwan adda addaatiif kennu ilaali: ˙ “Baayee Dhiphachuu Dhiisuu Kanan Dandau Akkamitti?” ˙ “Namoota Gargaaruu Kanan Qabu Maaliiﬁ?” Akkasumas, viidiyoo Hiriyoonni Kee Maal Jedhu—Qarshii jedhu ilaali.
Gammachuu Qabaachuuf Wantoota Barbaachisan
(Ingiliﬀaan argama. BIBLE TEACHINGS TEENAGERS jalaa ilaali)
FUULA 4-7 IJOOLLEE 3 ADDUNYAA MARA IRRAA 8 UUMAMA Kunuunsitoota Biqiltuu Balalianii Fi Bosona Naannoo Mudhii Lafaa Keessatti Argaman 10 MAATIIDHAAF Yeroo Mucaan Keessan Sobu 12 Yeroo Baayee Na Barbaachisuttan Abdii Argadhe 14 GAAFANNOO Piroofeesarri Akkaawuntiingii Amantii Isaa Ibsa 16 QAAMNI KANA TOLCHE JIRAA? Luka Fardaa
Vol. 96, No. 1 / Quarterly / OROMO Barruun Kun Koppii: 51,788,000 Afaan 101n Maxxanfama Barreeﬀamni kun kan hin gurguramnee ﬁ barreeﬀamoota addunyaa maratti Macaafa Qulqulluu barsiisuuf qophaaan keessaa tokko dha. Hojiin kunis buusii qarshii namoonni fedhiidhaan kennaniin deggerama. Ibsi gara biraan yoo kenname malee, caqasaw wan barruu kana keessatti argaman Macaafa Qulqulluu afaan Oromoo bara 1997 maxxanfame irraa kan fudhatamani dha. Caqasaw wan tokko tokko dalga ciibsee kan barreesse nuyi dha. Caqasichatti aansee “NW” yoo jedhame, caqasichi kan fudhatame Macaafa Qulqulluu Hiika Addunyaa Haaraa afaan Ingiliﬀaa ammayyaatiin qophaae irraa tauu isaa argisiisa. Waggoonni barruu kana keessatti argaman hundi lakkoofsa Awurooppaa kan argisiisani dha. Dh.K.D. jechuun, Dhaloota Kiristos Dura jechuu dha; Dh.K.B. jechuun immoo, Dhaloota Kiristos Booda jechuu dha. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus. 5 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany. Jarmanitti maxxanfame.
r Seenaa Macaafa Qulqulluu fakkiidhaan ibsame ilaali. Fuula gilgaala qabatee jirutti fayyadamuudhaan, ijoolleen kee waaee namoota Macaafa Qulqulluu keessatti ibsamanii ﬁ seera amalaa inni qabatee jiru ilaalchisee beekumsa qaban akka guddifatan gargaari. (Ingiliﬀaan argama BIBLE TEACHINGS CHILDREN jalaa ilaali)
Odeeﬀannoo dabalataa argachuu ykn kaﬀaltii malee Macaafa Qulqulluu qayyabachuu ni barbaaddaa? Weeb saayitii www.jw.org/om jedhamu ilaali ykn teessoowwan armaan gaadiitti barreessi. ITOOPHIYAAF: Yeyihowa Misikiroch, P.O. Box 5522, Addis Ababa, ¨ Ethiopia. JARMANIIF: Jehovas Zeugen, Zweigburo, 65617 Selters, Germany. Teessoo waajjiroota damee addunyaa maratti argaman hundaa argachuuf, www.jw.org/en/contact ilaali.
ADDUNYAA MARA IRRAA
SIWIIZARLAANDI Meeshaa xinnoon mallattoo kennuu ﬁ bakka hormaataa isaanitti simbirroota alpaayin iswiifti jedhaman sadiitti qabsiifame, simbirroonni kun gara Afriikaatti yeroo godaananitti utuu hin qubatin guyyaa 200 oliif akka balalian argisiiseera. Kanaan dura utuu addaan hin kutin karaa hammanaa kan deeman bineensota bishaan keessaa qofa akka taan yaadama ture.
Swift: 5 McPHOTO/age fotostock; GPS device: 5 Arizona Department of Public Safety
YUNAAYITID ISTEETIS Poolisoonni, teknooloojii konkolaataa shakkamtootaa duukaa yeroo buanitti balaa uumamu hirisuuf gargaaru fayyadamaa jiru. Malli inni tokko, meeshaa qilleensaan guutamee ﬁ dhukaasuuf gargaaru konkolaataa poolisootaatti hidhuu dha. Meeshaan kun meeshaa bakka wanti tokko jiru beekuuf gargaaru dhukaasanii konkolaataa duukaa buamutti qabsiisuuf gargaara. Karaa kanaan, poolisoonni saﬃsa balaadhaaf isaan hin saaxilleen shakkamtoota hordofuu ni dandau.
Walitti buiinsa sababii gabbarsuu gaaelaatiin uumamuun, saaatii tokko keessatti dubartiin tokko akka ajjeefamtu tilmaamama. Aadaan gabbarsuu kennuu ykn fudhachuu seeraan kan dhorkame taus, misirrichi ykn maatiin isaa gabbarsuun argatan gaaa akka hin taane yaaduu isaaniitiin kan kae bara 2012tti dubartoonni 8,200 ol taan ajjeefamaniiru.
GAANFA AFRIIKAA Ebla 2005 hanga Muddee 2012tti saamtonni galaana irraa, qarqara galaanaa naannoo Gaanfa Afriikaatti dooniiwwan 179 taan qabataniiru. Akka tilmaama qorannaa Baankii Addunyaatti, saamtonni kun dooniiwwan qabatan gadhiisuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 413 tau fudhataniiru.
2012 GADHIISISUUF DOOLAARA MILIYOONA
DOONIIWWAN QABAMAN 2005
GAMMACHUU QABAACHUUF WANTOOTA BARBAACHISAN “Yeroon gaaela godhadhuu ﬁ ijoollee qabaadhu gammachuu nan qabaadha.” “Yeroon mana dhuunfaa kootii qabaadhu gammachuu nan qabaadha.” “Yoon hojii kana argadhe gammachuu nan qabaadha.” “Yeroon . . . gammachuu nan qabaadha.”
AKKAS sitti dhagaamee beekaa? Galma kee irra yeroo geessu ykn waan hawwite sana yeroo argattu gammachuu hin badne argatteettaa? Moo gammachuun argatte suutuma suuta hirachuu jalqabe? Galma tokko irra gauun ykn waan hawwine tokko argachuun keenya gammachuu akka nuuf argamsiisu beekamaa dha; taus, gammachuun akkasii yeroodhaaf qofa kan turu tauu dandaa. Gammachuun itti fuﬁinsa qabu kan hundaae, galma keenya irra gauu ykn waan barbaadne tokko argachuu keenya irratti qofa miti. Kanaa mannaa, akkuma fayyaa qaamaa qabaachuu, gammachuu dhugaa argachuunis wantoota hedduu irratti kan hundaae dha. Hundi keenya iyyuu uumamni keenya adda adda dha. Wanti si gammachiisu nama kan biraa hin gammachiisu taa. Kana malees, yeroo umuriin keenya dabalaa deemu ni jijjiiramna. Tau iyyuu, akka ragaan argisiisutti wantoonni yeroo hunda gammachuu keenyaa wajjin wal qabatan tokko tokko jiru. Fakkeenyaaf, gammachuu dhugaa qabaachuun waan qabanitti gammaduu, hinaaﬀaa irraa fagaachuu, namoota jaallachuu ﬁ gama sammuu ﬁ miiraatiin cimina qabaachuu wajjin wal qabata. Maaliif akka tae haa ilaallu.
1. WAAN QABANITTI GAMMADUU
2. HINAAFFAA IRRAA FAGAACHUU
Namni ogeessi waaee uumama namootaa qorate tokko, ‘Horiin nama golga’ jedheera. Haa tau malee, “Namni horii jaallatu horii hin quufu, namni badhaadhummaa jaallatus isa hin quufu; kunis wanta waaee hin baafne dha” jechuudhaanis barreesseera. (Lallaba 5:10; 7: 12) Maal jechuu barbaadee ti? Jiraachuuf qarshiin kan nu barbaachisu taus, wanta qabnutti kan hin quufne tauu hin qabnu! Solomoon Mootichi Israael durii inni yaada kana barreesse, qabeenyi ykn jireenyi qananii gammachuu dhugaa kan argamsiisu tauu ﬁ dhiisuu isaa qoratee ture. “Wanta iji koo hawwe hundumaa ani hin dhowwanne, garaa koos gammaduu irraa hin dhowwine” jechuudhaan barreesseera.—Lallaba 1:13; 2:10. Solomoon qabeenya hammana hin jedhamne kan walitti qabate sia tau, mana guddaa, bakka bashannanaa bareeduu ﬁ kuusa bishaanii, akkasumas hojjettoota hedduu qaba ture. Waan barbaade hunda argatee ture. Kana irraa barumsa akkamii argate? Hamma tokko gammachuu kan isaaf argamsiise taus, gammachuun isaa itti hin fufne. “Wanti kun hundinuu waaee hin baasu, . . . aduu jala wanti buaa qabu hin jiru” jedheera. Jireenya iyyuu jibbee ture! (Lallaba 2:11, 17, 18) Eeyyee, Solomoon fedhii oﬁi guuttachuu irratti qofa xiyyeeﬀachuun, oolee bulee nama tokko gammachuu dhabsiisuu akka dandau hubateera.1 Qorannaawwan ammayyaa, yaada bara duriitti barreeﬀame kanaa wajjin wal simuu? Mata dureen barruu tokko irratti bae, ‘namni tokko waan jireenyaaf isa barbaachisu erga guuttatee booda, waan dabalataa yoo argate iyyuu gammachuu dabalataa akka hin arganne’ dubbata. Akka qorannaawwan argisiisanitti, namoonni wantoota baayee bitachuuf jecha wantoota iddoo guddaa kennuuﬁi qaban aarsaa yeroo godhan gammachuun isaanii ni hirata.
Hinaaﬀaan, “wanta namni kan biraan argatetti gadduu ykn aaruu ﬁ wanta sana argachuuf hawwuu” jedhamee hiikamuu dandaa. Akkuma xannachi tokko suutuma suuta guddatee lubbuu namaa galaafachuu dandau, hinaaffaanis jireenya namaa toachuu ﬁ gammachuu namaa balleessuu dandaa. Hinaaﬀaan nu keessatti guddachuu kan dandau akkamitti? Amala kana qabaachuu keenya akkamitti beekuu dandeenya? Mouu kan dandeenyu hoo akkamitti? Kitaabni Encyclopedia of Social Psychology (Insaayikilooppeediyaa Xinsammuu Hawaasaa) jedhamu, namoonni yeroo baayee warra tarii umuriidhaan, muuxannoodhaan ykn akkaataa guddinaa isaaniitiin isaaniin qixxaatanitti akka hinaafan dubbata. Fakkeenyaaf, daldaltuun tokko taatuu ﬁilmii beekamaa tae tokkotti hin hinaafu. Kanaa mannaa, daldaltuu isa caalaa milkaaaa taetti hinaafuu dandaa. Fakkeenyaaf, abbootiin taayitaa bulchiinsa Faares durii keessa turan tokko tokko, mootichatti utuu hin tain Daaniel isa hubannaa qabuu ﬁ akkuma isaanii abbaa taayitaa taetti hinaafanii turan. Namoonni kun Daanieliin ajjeesuuf mariachuun isaanii, hammam isatti aaranii akka turan argisiisa! Taus isaaniif hin milkoofne. (Daaniel 6:1-24) Insaayikilooppeediyaan armaan olitti caqasame akkas jedha:
SEERA BUUURAA MACAAFA QULQULLUU: “Akki jiree-
nya keessanii horiidhaaf sassataa hin tain, wanta argattaniin ‘Nu gaa’ jedhaa!”—Ibroota 13:5. 1 Seenaan waaee qorannaa Solomoon godhee dubbatu, Lallaba 2:1-11 irratti argama.
Dogoggoraaf Ilaalcha Sirrii Qabaadhu Namoonni cimina miiraa qaban dogoggora yeroo hojjetan oﬁtti aaruudhaan, “Ani dadhabaa dha” ykn “Ani gatii hin qabu” oﬁin hin jedhan. Macaafni Qulqulluun, “Yaadni cabaan . . . lafee gogsa” jedha. (Fakkeenya 17:22) Kitaabni The Power of Resilience (Faayidaa Cimina Miiraa) jedhamu akka dubbatetti, jireenya kee keessatti cimina miiraa qabaachuu yoo barbaadde, “dogoggorrii ﬁ dadhabinni wanta yoom iyyuu jiru tauu isaa hubachuu qabda . . . Filannaan qabdu dogoggora sanaaf karaa sirrii taeen furmaata kennuu dha.”
Dammaqaa! Amajjii-Bitootessa 2015 5
‘Warra Galata Galchan Taaa’
3. NAMOOTAAF JAALALA QABAACHUU
Gorsi Qolosaayis 3:15 irra jiru kun gorsa gaarii dha! Qorannaawwan akka argisiisanitti, wantoota gaarii jireenya keessatti qabnu irratti yaaduunii ﬁ gaarummaa nuu godhame dinqisiifachuun keenya, fayyaa gaarii akka qabaannu nu gargaara.
Kitaabni Social Psychology (Xinsammuu Hawaasaa) jedhamu, “Gammachuun namootaa hojii, galii, hawaasa ykn fayyaa isaanii caalaa, walitti dhufeenya warra kaanii wajjin qaban irratti kan hundaae dha” jedha. Namoonni gammadoo tauuf jaalala kennuu ﬁ argachuu qabu. Barreessaan Macaafa Qulqulluu tokko, “Jaalala yoon qabaachuu dhaabaadhe garuu, ani homaa miti” jedheera.—1 Qorontos 13:2. Yeroo kamitti iyyuu jaalala horachuun ni dandaama. Fakkeenyaaf, abbaan Vaanesaa hamaa ﬁ araada dhugaatii kan qabu ture. Kanaaf, Vaanesaan umurii ishee waggaa 14tti, manaa baatee maatiiwwan ijoollee of bira tursan biratti dabarsite; booda immoo mana namoonni mana hin qabne keessa bulanitti kan dabarsite sia tau, bakka kanatti Waaqayyo akka ishee gargaaru kadhattee akka turte ni
“Hinaaﬀaan warra kaan irratti miidhaa geessisuuf akka nama kakaasu hubachuun barbaachisaa dha. Kunis, hammeenyi garaa garaa seenaa keessatti raawwatame hinaaffaa wajjin kan wal qabate maaliif akka tae ifa nuu godha.”1 Amala kana qabaachuu keenya akkamitti beekuu dandeenya? Akkas jedhii of gaafadhu: ‘Hiriyaan koo tokko milkaaina yeroo argatu nan gammada moo nan aara? Obbolaa koo keessaa tokko, barataa cimaan kutaa kootti baratu ykn namni ana faana hojjetu tokko karaa tae tokkoon milkaaina yoo dhabe nan gadda moo nan gammada?’ Deebiin ati gaaﬃlee kanaaf kennitu, amala kana qabaachuu ﬁ dhiisuu kee si hubachiisa. (Uumama 26:12-14) Insaayikilooppeediyaan olitti caqasame akkas jedha: “Hinaaﬀaan, dandeettii namni tokko wantoota gaggaarii jireenya keessatti argatetti gammaduuf qabu jalaa balleessuu ﬁ kennaawwan hedduu jireenya keessatti argateef galateeﬀannaa akka hin qabaanne isa gochuu dandaa. . . . Miirri akkasii gammachuu akka hin qabaane nu godha.” Amala gad of deebisuu isa dandeettii ﬁ amala gaarii namootaa dinqisiifachuuf nu dandeessisu guddifachuudhaan, hinaaﬀaa mouu ni dandeenya. Macaafni Qulqulluun, “Gad of deebisuudhaan warra kaan of irra caalchisaa lakkaaaa malee, yaada oﬁttummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetinaa!” jedha.—Filiphisiiyus 2:3. SEERA BUUURAA MACAAFA QULQULLUU: “Egaa kot-
taa of-dhiibduu, walitti naqxuu, walitti hinaaftuu tauu in dhiifnaa!”—Galaatiyaa 5:26.
Hinaaﬀaan, dandeettii namni tokko wantoota gaarii jireenya keessatti argatetti gammaduuf qabu jalaa balleessuu dandaa
yaadatti. Achii, maatii ulaagaa Macaafa Qulqulluu “Jaalalli dandaaa dha, gaarummaas in argisiisa” jedhuun geggeeﬀamu bira akka jiraattu godhame; tarii kun deebii kadhannaa ishee tauu dandaa. (1 Qorontos 13:4) Haalli maatii sanaa ﬁ wanti yeroo Macaafa Qulqulluu qayyabattu baratte, Vaanesaan miira gaarii akka qabaattuu ﬁ karaa sammuu cimtuu akka taatu ishee gargaareera. “Mana barumsaatti qabxiin koo D ﬁ F irraa gara A ﬁ Btti guddatee ture” jetteetti. Vaanesaan wanti ishee irra gae amma iyyuu yeroo tokko tokko miira ishee kan jeequ taus, yeroo ammaa gaaela gammachiisaa taee ﬁ ijoollee durbaa lama qabdi. SEERA BUUURAA MACAAFA QULQULLUU: “Jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa!”—Qolosaayis 3:14.
1 Seenaawwan kana keessaa inni guddaan Yesus irratti kan raawwatame dha. Maarqos 15:10, ‘luboonni warri angafoonni hinaaﬀaadhaan’ dabarsanii akka isa kennan dubbata.
Gaaﬃiwwan Macaafa Qulqulluu kan biraatiif deebii argachuuf Weeb saayitii www.jw.org ilaali
4. CIMINA MIIRAA QABAACHUU Namni rakkina irraa walaba tae jiraa? Akkuma Macaafni Qulqulluun jedhu, “boouun yeroo qaba,” akkasumas “gadduun yeroo qaba.” (Lallaba 3:4) Cimina miiraa qabaachuun, ilaalcha sirrii qabaachuudhaan dandaanii rakkina keessa darbuuf nu gargaara. Haala Kaarolii ﬁ Miildireed haa ilaallu. Kaarol, dhukkuba lafee dugdaa cimaa tae, dhukkuba sukkaaraa ﬁ yeroo hirribaatti rakkina hafuura baafachuu kan qabdu sia tau, dhukkubni ijaa cimaa tae ija ishee bitaa jaamseera. Taus akkas jetteetti: “Miirri abdii kutannaa akka na irra hin turre gochuufan yaala. Haallin keessa jiru baayee na gaddisiisa. Tau iyyuu, waaee koo yaaduu dhiiseen wantan amma iyyuu gochuu dandauuf, keessumaa immoo wantan warra kaaniif gochuu dandauuf Waaqayyoon nan galateeﬀadha.” Miildireedis dhukkuba artiraayitasii, kaansarii harmaa ﬁ sukkaara dabalatee dhibee hedduu qabdi. Taus, akkuma Kaarol isheenis rakkina ishee irratti xiyyeeﬀachuu dhiisuuf yaalti. Akkas jechuudhaan barreessiteetti: “Namoota jaallachuu ﬁ namoota dhukkubsatan jajjabeessuu kanan baradhe sia tau, kana gochuun koo anas gargaareera. Yeroon warra kaan gargaarutti waaee oﬁi koo akkan hin yaaddofne hubadheera.”
Dubartoonni lamaan kun yaalii fayyaa gaarii argachuu kan barbaadan taus, ilaalcha isaanii ﬁ akkaataa yeroo isaaniitti itti fayyadaman irratti malee haala fayyaa isaanii irratti hin xiyyeeﬀatan. Kun immoo gammachuu eenyu iyyuu isaan jalaa fudhachuu hin dandeenye akka qabaatan godheera. Kana malees, warri kaan jaalala guddaa kan isaaniif qaban tauu isaa irra iyyuu, isaanis namoota rakkina garaa garaa keessa jiraniif madda jajjabinaa taaniiru. SEERA BUUURAA MACAAFA QULQULLUU: “Namni qoramsa isatti dhufu obsaan dandae, haa gammadu! Qoramee erga ilaalamee booddee, jireenya . . . akka gonfootti argachuuf jira.”—Yaaqoob 1:12.
Ogummaan Macaafa Qulqulluu keessaa hojii irra oolfamnaan, “warra jabeessanii ishee qabataniif muka jireenyaa ti, warri jabeessanii ishee qabatan haa gammadan!” (Fakkeenya 3: 13-18) Ogummaa Macaafa Qulqulluu keessatti ibsametti fayyadamuudhaan, kun dhugaa tauu isaa maaliif hin mirkaneeﬀattu? Waaqni gammadaan inni Macaafa Qulqulluu barreessise atis gammachuu akka qabaattu barbaada. ˛
Kaarolii ﬁ Miildireed warra kaan jajjabeessuudhaan gammachuu argatu
Dammaqaa! Amajjii-Bitootessa 2015 7
Kunuunsitoota Biqiltuu Balalianii Fi Bosona Naannoo Mudhii Lafaa Keessatti Argaman
Sanyii Bittinneessuu Simbirroonni halkanii kun baayeen isaanii 1 Simbirroonni halkanii Oold Worlid ﬁruut baatis jedhaman Afriikaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa ﬁ Odoolawwan Paasiﬁik tokko tokko keessatti argamu.
muka ﬁrii isaan jaallatan godhatu ykn abaaboowwan nadhii baayee qaban barbaaduuf halkan halkan asii ﬁ achi balaliu. Yeroo nyaata barbaaduu balalian kanatti, nyaanni garaa isaanii keessa jiru kan daakamu sia tau, qolaa ﬁ sanyii daakamuu hin dandeenye kosii isaanii wajjin buusu. Yeroo nadhii abaaboo baayee jaallatan xuuxanitti, abaaboowwan wal horsiisuudhaan (poolineessuudhaan) achumaan hojii biqiltuu kunuunsuu raawwatu. Simbirroonni kun halkan halkan karaa dheeraa waan balalianiif iddoo garaa garaatti sanyii bittinneessu. Yeroo balalianitti kosii isaanii wajjin sanyii ni buusu, kosiin isaan sanyii kanaa wajjin buusan kun sanyichaaf xaaoo taa. Biqiltoota garaa garaa bosonoota naannoo mudhii lafaa keessa jiraniif abaaboowwan isaanii kan wal horsiisu ykn sanyii isaanii iddoo garaa garaatti kan facaasu simbirroota halkanii ti.
Bat eating ﬁg: 5 Merlin D. Tuttle, Bat Conservation International, w w w.batcon.org; small bat: Flickr RF/Getty Images
KKUMA kunuunsituun biqiltuu hundi beeku, biqiltuun tokko akka gaariitti kan guddatu iddoo sirrii ﬁ yeroo sirriitti yoo facaafame dha. Haala kana irraa adda taeen bosona naannoo mudhii lafaa tokko tokko keessatti sanyiin kan facaafamu halkan halkan qilleensa irraa sia tau, malli kunis hunda caalaa buaa qabeessa dha. Kunuunsitoonni biqiltuu balalianii sanyii facaasan simbirroota halkanii Oold Worlid ﬁruut baatis jedhaman sia taan, sanyii isaanii keessaa tokko tokko sardiidota balalian jedhamanii waamamu.1
Simbirroonni halkanii ﬁruut baatis jedhaman, biqiltuuwwan akaakuu 300 ykn isaa ol taanii ﬁ naannoo mudhii lafaatti argaman wal horsiisu
BOSONA BADIISA IRRAA OOLCHUU Yeroo bosonni naannoo mudhii lafaa ciramu, simbirroonni halkanii mukeetiin sun deebianii akka biqilan gochuu irratti gaee guddaa qabu. Hojii ‘biqiltuu kunuunsuudhaan’ raawwataniin, sanyii yeroo booda muka tau facaasuu ni dandau. Kitaabni Bats of the World, (Simbirroota Halkanii Addunyaa) jedhamu, “Ilmaan namootaa jireenya gaarii jiraachuun isaanii haalli naannoo addunyaa gaarii tauu isaa irratti kan hundaae sia tau, haala naannoo gaarii gochuuf immoo simbirroonni halkanii ni barbaachisu” jedha.
Abaaboon muka boobaab jedhamuu umuriin isaa yoo baayate saaatii 24 dha. Tau iyyuu, simbirroota halkanii kanaaf abaaboo nadhiin keessa guute sana iddoo isaa argatanii sanyii isaa muka boobaab kan biraatti dabarsuuf yeroon kun gabaabaa miti
Simbirroonni kun fagaatanii waan balalianiif, dandeettii kallattii beekuu ﬁ waan tokko fagoodhaa arguu qabaachuun isaan barbaachisa. Dukkana keessatti namoota caalaa arguu dandau. Halluuwwan tokko tokko iyyuu addaan baasuu ni dandau. Guyyaas tae halkan balaliuun isaan gammachiisa.
Jireenya Maatii Sanyiin simbirroo halkanii sardiida balaliu (Piteropas saamoeensis) jedhamuu ﬁ Saamooaa keessatti argamu, kormaanii ﬁ dhaltuun isaa hamma dhumaatti waliin jiraatu. Sanyiiwwan simbirroota halkanii tokko tokko irratti akka hubatametti, isheen dhaltuun torban murtaaeef mucaa ishee bakka dhaqxu hunda baattee dhaquudhaan, akkasumas hamma gaeessa tautti hoosisuudhaan kunuunsa gaarii
KANA BEEKTA TURTEE? Simbirroota halkanii hedduu irraa haala adda taeen, simbirroonni halkanii ﬁruut baatis jedhaman kun, nyaata isaanii kan argatan owwaattuutti fayyadamanii utuu hin tain, arguu ﬁ fuunfachuudhaani. Iddoon iji isaanii inni gurguddaan jiru sochii halkan raawwataniif mijaaaa dha
gootiif. Sanyiiwwan simbirroota kanaa lama irratti akka hubatametti, isheen dhaltuun “deessistuu” yeroo dhaltutti ishee gargaartu qabaachuu illee ni dandeessi. Kan nama gaddisiisu garuu, sanyiin isaanii baduu kan gae sia tau, kanaaf immoo sababiin inni tokko bakki jireenyaa isaanii mancauu isaa ti. Sanyiin biqiltuuwwan odoolawwan Paasiﬁik Kibbaa keessa jiranii tokko tokko simbirroota halkanii kanaan ala wal horuu hin dandaan jechuun ni dandaama; kanaaf sanyiin simbirroota kanaa baduun isaa odoolawwan kanaaf baayee yaaddessaa dha. Dhuguma iyyuu, hojiin kunuunsitoota biqiltuu balalian kanaa akka laayyootti ilaalamuu hin qabu. ˛
Dammaqaa! Amajjii-Bitootessa 2015 9
M A AT I I D H A A F  I J O O L L E E G U D D I S U U
Yeroo Mucaan Keessan Sobu HAALA RAKKISAA Mucaan keessan inni waggaa shanii, kutaa itti aanu keessatti taphachaa jira.1 Wanti tokko kufee yeroo caccabu dhageessan. Gara mucaa keessanii ﬁigdanii yeroo dhaqxan, qodaa abaaboo caccabe bira dhaabatee isa argitan. Mucaan keessan waa akka balleesse fuula isaa irraa hubachuu ni dandeessu. “Qodaa abaaboo sana ni cabsitee?” jettanii jabeessitanii isa gaafattu. Innis dafee, “Lakki Harme, ani hin cabsine” jedhee deebisa. Mucaan keessan inni waggaa shanii soba ija baase yeroo sobu kan isa qabattan yeroo jalqabaatiif miti. Kun isin yaaddessuu qabaa? 1 Mata duree kana keessatti saala dhiiraatiin kan fayyadamne taus, barumsichi saala lamaaniifuu ni hojjeta.
WANTA BEEKUU QABDAN Sobni hundumtuu gadhee dha. Macaafni Qulqulluun, Yihowaan “arraba sobu” akka hin jaallanne dubbata. (Fakkeenya 6: 16, 17) Seerri Israaelootaaf kenname, eenyu iyyuu akka nama hin gowwoomsine ajaja cimaa kenna ture.—Lewwoota 19:11, 12. Taus sobni hundumtuu qixxee miti. Sobni tokko tokko, nama kan biraa miidhuuf hammeenyaan kan dubbatamu dha. Sobni kaan immoo, tarii qaanii ykn adaba jalaa ooluuf jecha dhiibbaa haalli yeroo sanaa geessisuun kan dubbatamu dha. (Uumama 18:12-15) Sobni hundumtuu dogoggora taus, sobni tokko tokko isa kaan irra cimaa dha. Mucaan keessan yoo sobe, umurii isaa ﬁ sababii itti sobe tilmaama keessa galchaa. Mucaa keessan ijoollummaa isaatti gargaaruuf yaalaa. Doktoor Deeviid Woolshi, “Ijoolleen keessumaa yeroo rakkisaatti dhugaa dubbachuu barachuun isaanii baayee barbaachisaa dha. Walitti dhufeenyi wal amanuu irratti hundaaa; sobni immoo wal amanuun akka hin jiraanne godha” jedhaniiru.1 Mucaan keessan amala akkasii yoo qabaates hin dhiphatinaa. Mucaan keessan sobe jechuun, yeroo gabaabaa keessatti amalli isaa ni mancaa jechuu miti. Macaafni Qulqulluun, “Wallaalumni yaada mucaatti qabamee jira” akka jedhu yaadadhaa. (Fakkeenya 22:15) Ijoolleen tokko tokko tarii karaa salphaa adaba jalaa itti oolan akka taetti yaaduudhaan yeroo soban wallaalummaa akkasii argisiisu. Wanti isin yeroo kanatti gootan murteessaa dha. 1 Kitaaba, Karaa Warri Hin Tau Jechuu Itti Dandaanii Fi Sababii Ijoolleen Hundi Jecha Kana Dhagauu Itti Qaban (Ingiliﬀa) jedhamu irraa kan fudhatame.
Weeb saayitii www.jw.org jedhamu irraa yaada dabalataa maatiidhaaf tau argachuu dandeessa
WANTA GOCHUU DANDEESSAN Mucaan keessan maaliif akka sobe hubachuuf yaalaa. Adabamuu sodaatee tii? Akka isin hin aarre barbaadee tii? Mucaan keessan xiyyeeﬀannaa hiriyoota isaa harkisuuf jedhee wanta tokko uumee kan dubbatu, garaa garummaa dhugaa ﬁ hawwii gidduu jiru beekuuf umuriin isaa waan hin geenyeeﬁi? Mucaan keessan maaliif akka sobe yoo beektan, caalaatti isa gargaaruu dandeessu.—Seera buuuraa Macaafa Qulqulluu: 1 Qorontos 13:11. Yeroo tokko tokko gaaﬃi isa gaafachuu mannaa yaaduma keessan itti himaa. Haala jalqaba mata duree kanaa irratti ibsame irratti, haati mucichaa wanta raawwatame utuu beektuu, “Qodaa abaaboo sana ni cabsitee?” jettee jabeessitee isa gaafatte. Mucichi immoo tarii dheekkamsa ishee waan sodaateef ni sobe. Haa tau malee, gaaﬃi isa ceephau gaafachuu mannaa, “Wayyoo, qodaa abaaboo sana cabsite mitii!” utuu jettee maaltu akka tau yaadaa. Haati isaa gaaﬃi isa gaafachuu mannaa yaaduma ishee dubbachuun ishee, mucichi sobuuf akka hin qoramne godha; akkasumas amanamummaa akka guddifatu isa gargaara. —Seera buuuraa Macaafa Qulqulluu: Qolosaayis 3:9. Yeroo dhugaa dubbatu isa jajaa. Ijoolleen uumamumaan warra isaanii gammachiisuu ni barbaadu; kanaaf, isaan gargaaruudhaaf amala isaanii kanatti fayyadamaa. Mucaan keessan amanamummaan amala maatii keessatti barbaachisu akka taee ﬁ kanaan kan kaes dhugaa akka dubbatu akka isa irraa eegdan akka beeku godhaa.—Seera buuuraa Macaafa Qulqulluu: Tiitoos 2:10. Sobni wal amanuun akka hin jiraanne akka godhuu ﬁ amantii takkaa bade deebisuun immoo yeroo dheeraa fudhachuu akka dandau mucaa keessanitti himaa. Yeroo dhugaa dubbatu isa jajuudhaan, amala gaarii qabu akka guddifatu godhaa. Fakkeenyaaf, “Dhugaa dubbachuun kee na gammachiisa” jechuunii dandeessu. Fakkeenya taaa. Isin bilbilaan nama tokko haasofsiisuu waan hin barbaadneef “Mana hin jirtu jedhiin” kan jettan ykn mana ooluu waan barbaaddaniif qofa “Waan na dhukkubeef manaa hin bau” kan jettan yoo tae, mucaan keessan dhugaa akka dubbatu irraa eeguu hin dandeessan.—Seera buuuraa Macaafa Qulqulluu: Yaaqoob 3:17, Hiikkaa Waltaaa Haaraya. Macaafa Qulqulluutti fayyadamaa. Seerri buuuraa Macaafa Qulqulluu ﬁ seenaan dhugaan isa keessa jiru amanamummaa jajjabeessa. Kitaabni Dhugaa Baatota Yihowaatiin qophaaee ﬁ Barsiisaa Guddicharraa Baradhu jedhamu, ijoollee keessan seera buuuraa Macaafa Qulqulluu barsiisuuf isin gargaaruu dandaa. Boqonnaa 22ﬀaan, “Sobuu Kan Hin Qabne Maaliiﬁ?” jedha. (Yaada boqonnaa kana keessaa fudhatame, saanduqa “Kitaaba Ijoollee Keessan Gargaaru” jedhu irraa ilaali.) Kitaabni Barsiisaa Guddicharraa Baradhu jedhamu www.jw.org/om irratti ni argama. ˛
C A Q A S O O TA I J O O TA A N “Mucummaa kootti . . . akka mucaattis sababii nan kennan ture.” —1 Qorontos 13:11. “Soba walitti hin dubbatinaa!” —Qolosaayis 3:9. “Guutummaatti amanamummaa gaarii haa argisiisan.”—Tiitoos 2:10. “Ogummaan samii iraa dhufu . . . fakkeessuus uf keessaa hin qabu.” —Yaaqoob 3:17, Hiikkaa Waltaaa Haaraya.
KITAABA IJOOLLEE KEESSAN GARGAARU “Tarii akka tasaa qodaa tokko ni cabsita taa. Eenyu akka cabse yommuu gaafatamtu garuu, obboleessikee ykn obboleettiinkee akka cabsan dubbachuu qabdaa? Yookiin eenyu akka cabse akka hin beekne fakkeessuuf yaalii gochuu qabdaa? . . . Waan fedheyyuu yoo goone, sobuun keenya caalaatti rakkina keessa nu galcha; kana malees wanta walakkaansaa qofti dhugaa tae dubbachuu hin qabnu. Macaafni Qulqulluun, ‘Dhugaa dubbadhaa!’ jedha. Akkasumas, ‘Soba walitti hin dubbatinaa!’ jedha. Yihowaan yeroo hunda dhugaa kan dubbatu tauusaarrayyuu, nuyis dhugaa akka dubbannu barbaada.—Efesoon 4:25; Qolosaayis 3:9.” Yaada kitaaba Barsiisaa Guddicharraa Baradhu jedhamu irraa fudhatame.
Dammaqaa! Amajjii-Bitootessa 2015 11
Yeroo Baayee Na Barbaachisuttan Abdii Argadhe MIIKLOSH LEEKS AKKA DUBBATETTI Battalumatti fuula kootiin bishaan keessatti kufeen of arge. Qilleensa fudhachuudhaaf mataa koo ol qabuuf kanan yaale taus, mormi koo naa ajajamuu dide. Baayee naee, dugda kootiin garagaluuf kanan yaale taus, harkaa ﬁ miilli koos na dide. Bishaan somba kootti seenuu jalqabe. Bona bara 1991 guyyaa hoaa kanatti, jireenyi koo guutummaatti jijjiirame.
KAABA baha Hangaarii, magaalaa Seereenchi keessatti kanan dhaladhe sia tau, mandara Tisaladaanii jedhamtu keessattan guddadhe. Bara 1991 Waxabajjii keessa, anii ﬁ hiriyoonni koo bakka baayee baramaa hin taanee ﬁ naannoo Laga Tiizaatti argamu tokko dhaqne. Bishaanichi gadi fagoo dha jedhee waanan yaadeef utaaleen mataadhaan keessa seene. Dogoggora guddaa ture! Lafeen morma koo ﬁ lafeen dugda koo ni cabe. Hiriyaan koo akkan sochoaa hin jirre waan hubateef, utuun bishaaniin hin liqimfamin suuta jedhee harkisee na baase. Waanan of hin wallaalleef rakkinni guddaan tokko akka uumame naa galee ture. Namni tokko tajaajila balaa tasaa waamee, heelikooptariin fuudhee hoospitaalatti na geesse; achitti doktooronni lafeen dugdaa koo caalaatti akka hin miidhamneef yaalii baqaqsanii hodhuu naa godhan. Sana booda, gar-
gaarsa dabalataatiif gara magaalaa guddoo Hangaarii, Budaapeestitti na geessan. Jia sadiif dugda kootiinan ciise. Mataa koo sochoosuu kanan dandau taus, gateettii koo gaditti qaama koo sochoosuu hin dandaun ture. Umurii koo waggaa 20tti gargaarsa namaa malee sochouun dadhabe. Baayee waanan abdii kutadheef duuu barbaadeen ture. Dhuma irratti gara manaatti yeroon deebietti, warri koo kunuunsa naa gochuu akka dandaaniif leenjii fudhatan. Taus na kunuunsuun karaa miiraas tae karaa qaamaa isaaniif ulfaataa ture; gara waggaa tokkoo booda dhiphinni sammuu na qabate. Yeroo kanatti, ogeessota irraa gorsa kanan argadhe sia tau, kunis ilaalchan hirina qaamaa kootiif qabu jijjiiruuf na gargaareera. Waaee jireenyaa gadi fageenyaan yaaduus nan jalqabe. Jireenyi kaayyoo qabaa? Haalli gaddisiisaan akkasii kan na mu-
date maaliiﬁ? Deebii argachuuf barruulee ﬁ kitaabota dubbiseera. Macaafa Qulqulluus dubbisuuf yaalee kanan ture taus, hubachuuf natti ulfaate. Kanaafuu dubbisuu nan dhiise. Qeesii tokkoos haasofsiiseen ture; garuu deebiin isaa na hin quubsine. Bara 1994, birraa keessa Dhugaa Baatonni Yihowaa lama dhufanii abbaa koo haasofsiisan; innis anaan akka haasofsiisan isaan gaafate. Kaayyoo Waaqayyo lafa jannata gochuuf, akkasumas dhukkubaa ﬁ rakkina hambisuuf qabu natti himan. Wantin dhagae baayee gaarii taus na shakkisiise. Haa tau malee, kitaabota Macaafa Qulqulluu qayyabachuuf gargaaran lama fudhadheen ture. Ergan kitaabota kana dubbisee booda Dhugaa Baatonni sun Macaafa Qulqulluu akkan qayyabadhu na afeeran; anis afeerraa isaanii nan fudhadhe. Akkasumas akkan kadhadhu na jajjabeessan. Marii keenya itti fufaa yeroo deemnu, gaaﬃlee koo hedduu-
dhaaf Macaafa Qulqulluu irraan kallattiidhaan deebii argadhe. Waaqayyo dhuguma waaee koo akka yaadus mirkanaaaan tae. Dhuma irrattis waggaa lamaaf ergan Macaafa Qulqulluu qayyabadhee booda, Fulbaana 13, 1997 meeshaa dhagna itti dhiqatan keessattan cuuphame. Guyyaan kun jireenya koo keessatti guyyaan baayee itti gammade dha. Bara 2007tti bakka qaama miidhamtoonni keessa jiraatanii ﬁ Budaapeest keessatti argamu keessa jiraachuun jalqabe. Gara iddoo kanaa dhaquun koo, wantoota gammachiisoo ani baradhe warra kaanitti himuuf carraa hedduu naa baneera. Yeroo haalli qilleensaa gaarii tautti, wiilcheerii mootoraan hojjetuu ﬁ areeda kootiin oofutti fayyadameen gadi baee namoota haasofsiisa. Gargaarsa qarshii maatiin gumii koo keessatti argamu tokko naa godheen, kompiitara sochii mataa koo hordofuudhaan hojjetu argachuu dandaeera. Meeshaan kun Intarneetiitti fayyadamee bilbilaan namoota haasofsiisuuf, akkasumas namoota miseensonni gumii koo manatti hin arganneef xalayaa barreessuuf na gargaareera. Karaa kanaan namoota gargaaruun koo namootaa wajjin wal qunnamuu irratti dandeettii koo baayee kan naa fooyyesse tauu isaa irra iyyuu, oﬁi koo irratti akkan hin xiyyeeﬀanne na gargaareera. Walgaii Kiristiyaanaa irratti iyyuu argamuu dandaeera. Yeroon gara galma Mootummaa dhaqu, obboloonni suuta jedhanii wiilcheerii koo wajjin na baatanii bakka walgaii, gamoo tok-
koﬀaa irratti argamutti na geessu. Walgaii irratti obboloonni yaada akka kennan yommuu afeeramanitti, obboleessi na bira taauu harka isaa naa baasa. Achii yeroon yaada kennu Macaafa Qulqulluu koo ykn barreeﬀama qayyabatamaa jiru ol naa qaba. Dhukkubbii wal irraa hin cinnetu natti dhagaama; akkasumas wanta hunda gargaarsa namootaatiin alatti raawwachuu
fa Qulqulluu guyyaa guyyaatti dubbisuudhaan, akkasumas obboloota koo hafuuraa irraas jabina nan argadha. Michummaan isaanii, deggersa isaan karaa miiraa naa godhan, akkasumas kadhannaan anaaf dhiheessan gama yaadaa ﬁ miiraatiin madaallii koo akkan eegu na gargaareera. Yihowaan jajjabina kan naa kenne yeroo baayee na barbaachisetti ture. Addunyaa haaraa
Waaqayyo dhuguma waaee koo akka yaadu mirkanaaaan tae hin dandau jechuun ni dandaama. Kanaan kan kaes, al tokko tokko abdiin kutadha. Haa tau malee, Yihowaan wanta na yaaddessu hunda yeroon itti himu akka dhagau waanan beekuuf, michummaan isaa wajjin qabu na jajjabeessa. Macaa-
keessatti fayyaa guutuu akkan qabaadhus abdii naa kenneera. Kanaaf, yeroon jaalalaa ﬁ gaarummaa isaa isa guddaadhaaf ‘asii ﬁ achi adeemee, quruphisaa Waaqayyoon itti galateeﬀadhu’ hawwiidhaanan eeggadha. —Hojii Ergamootaa 3:6-9. ˛
Meeshaa sochii mataa koo hordofuudhaan hojjetutti fayyadamee yeroon ergaa Macaafa Qulqulluu namootatti himu
Dammaqaa! Amajjii-Bitootessa 2015 13
G A A FA N N O O  I ST E E FA N T E E Y L A R
Piroofeesarri Akkaawuntiingii Amantii Isaa Ibsa Piroofeesar Isteefan Teeylar Yunivarsiitii Teknoolojii Siidnii, Awustiraaliyaa keessatti barsiisa, akkasumas qorannaa raawwata. Gabaawwan maallaqa hedduu sochoosanii ﬁ karaa itti gatiin isaanii toatamuu dandau qorata. Dammaqaan! qorannaan isaa amantii isaa irratti dhiibbaa kan geessise akkamitti akka tae isa gaafateera.
5 John Warburton-Lee Photography/Alamy
Mee akkaataa guddinaa kee nutti himi. Warri koo waldaa amantiitti kan deddeebian sia tau, amanamoo ﬁ hojiitti cimoo turan. Barumsa gaarii akkan argadhu na jajjabeessu turan; kanaaf, Yunivarsiitii Niiw Saawuz Weelsitti waaee daldalaan baradhe. Qorannaa gochuu akkan jaalladhu waanan hubadheef, hojii barsiisuu ﬁ qorannaa gochuu wajjin wal qabatu hojjechuufan murteesse.
Qorannaa akkamii goote? Keessumaa hojiin gabaa aksiyoonii haala akkamiitiin akka raawwatamu beekuu nan barbaadan ture. Gabaan aksiyoonii namoonni aksiyooniiwwan dhaabbata tokkoo akka bitanii ﬁ gurguran kan dandeessisu sia tau, qarshii argataniin hojii isaanii ittiin geggeessu. Wantoota gatii aksiyoonii irratti dhiibbaa geessisan irrattis qorannaa nan godha.
Fakkeenya tokko nuu kennuu dandeessaa? Dhaabbileen yeroo murtaaetti galii isaanii gabaasa gochuun isaan irraa eegama. Abbootiin qabeenyaa gama qarshiitiin haala dhaabbatichi keessa jiru beekuuf gabaasa kana fayyadamu. Haa tau malee, karaan isaan buaa argatan ittiin gabaasan tokko tokko dhaabbataa miti. Qeeqxonni tokko tokko haalli akkasii dhaabbileen buaa isaanii sirriitti akka hin gabaasne karaa isaanii bana jedhu. Abbootiin qabeenyaa odeeﬀannoo sirrii ﬁ guutuu tae argachuu kan dandaan akkamitti? Warri toannaa godhan hoo, gabaawwan maallaqa guddaa sochoosan karaa sirrii taeen hojjechaa jiraachuu isaanii beekuuf odeeﬀannoo akkamiitu isaan barbaachisa? Anii ﬁ namoonni anaa wajjin hojjetan gaaﬃlee kanaaf deebii argachuuf yaalaa jirra.
Macaafa Qulqulluu qayyabachuun wantan hanga haraatti hojjedhe keessaa hojii isa guddaa dha Amantiin kee maal ture? Warra koo wajjin Waldaa Pirisbiteeriyaanii dhaqaan ture; taus umurii waggoota kurnanii keessa utuun jiruu amantii irraa nan fagaadhe. Uumaan akka jiru nan amana, akkasumas Macaafa Qulqulluudhaaf kabaja qaban ture; taus rakkina jireenya keessatti nu mudatuu wajjin haala wal qabateen amantiin kan nama gargaaru tauu isaa shakkii qaban ture. Gareewwan amantii, gareewwan hawaasaa wajjin tokkuma natti tau turan. Awurooppaa keessatti waldaalee amantii gurguddaa hedduu dhaqeen ture; utuu addunyaan hiyyummaadhaan guutamee jiruu, isaan qabeenya hedduu kan qabaatan maaliif akka tae naaf hin galu ture. Garaagarummaa jiru kana fudhachuun waan natti ulfaateef, amantii irratti shakkii guddaatu natti uumame.
Ilaalcha kee kan jijjiire maali dha? Haati manaa koo Jeniifar Dhugaa Baatota Yihowaa wajjin Macaafa Qulqulluu qayyabachuu ﬁ walgaii isaanii irratti argamuu jalqabdee turte; kanaaf, anis ishee wajjin dhaqee jara kana ilaaluu akkan qabu natti dhagaame. Waaee Macaafa Qulqulluu waan tokko iyyuu akkan hin beekne hubachuuf yeroo natti hin fudhanne. Kun baayee na naasise! Sana booda Dhugaa Baatotaa wajjin Macaafa Qulqulluu qayyabachuun jalqabe. Malli qayyabannaa Dhugaa Baatota kanaa baayee na dinqisiise.
Gaaﬃlee kaasu, ragaawwan walitti qabanii qorannaa irratti godhu, achii xumura amansiisaa tokko irra gau; kun immoo malan qorannaa geggeessuuf itti fayyadamaa ture dha! Jeniifar cuuphamtee waggoota muraasa booda, anis bara 1999tti cuuphameen Dhugaa Baatuu Yihowaa tae.
Beekumsi ati dinagdee ilaalchisee qabdu amantii Macaafa Qulqulluu irratti qabdu sii cimseeraa? Akka gaariitti naa cimse. Fakkeenyaaf, Seerri Waaqayyo Israaeloota duriitiif kenne rakkina dinagdee hamma haraatti ogeessota dinagdee mudatuuf furmaata kan kennu ture. Seerichi Israaeloonni warra hiyyeessota taaniif qarmii akka dhiisan ni jajjabeessa ture (kun gibiraa ﬁ inshuraansii wajjin wal fakkaata); warra rakkataniif liqii dhala hin qabne akka kennanis isaan irraa eega ture (kun liqiidhaaf haala mijeessuu wajjin wal fakkaata); akkasumas, lafti waggaa 50 booda abbaa qabeenyaatiif akka deebifamu ni ajaja ture (kun mirga abbaa qabeenyummaa eeguu wajjin wal fakkaata). (Lewwoota 19:9, 10; 25:10, 35-37; Keessa Deebii 24: 19-21) Qophiiwwan kunii ﬁ kan biroon karaawwan gurguddaa sadiin sabicha gargaaraniiru: (1) Rakkinni maallaqaa wajjin wal qabate yeroo isaan mudatu isaan gargaaraniiru; (2) hiyyummaa keessaa akka baan isaan gargaaraniiru; akkasumas (3) wal caalmaa gama dinagdeetiin namoota gidduu jiru hiri-
saniiru. Kun hundi kan tae dinagdeen akka saayinsiitti beekamuu isaa waggaa 3,000 dura dha! Macaafni Qulqulluun ilaalchawwanii ﬁ amaloota tasgabbii dinagdeetiif barbaachisaa taan ni jajjabeessa. Fakkeenyaaf, namoonni amanamoo, gara laafeyyii ﬁ arjoota akka taan barsiisa. (Keessa Deebii 15:7-11; 25:15; Faarfannaa 15) Kan nama dinqisiisu, kufaatii dinagdee dhiheenyatti uumameen kan kae, manneen barumsaa daldalaa ﬁ dhaabbileen daldalaa tokko tokko, ogeessonni dinagdee ulaagaalee amalaa wajjin wal qabatan hojii irra oolchuuf waadaa akka galan gochaa jiru. Akka ilaalcha kootti garuu, ulaagaaleen amalaa Macaafa Qulqulluu keessa jiran, seerawwan daldalaa wajjin wal qabatan irra baayee caalu.
Amantiin kee amala kee irratti jijjiirama akkamii ﬁde? Jeniifar amalli koo akka jijjiirame natti himti. Kanaan dura namni matumaa dogoggora hojjechuu akka hin qabne natti dhagaama ture; akkasumas wanti tokko sirrii miti taanaan dogoggora dha jedheen yaadan ture. Seera akkaawuntiingii wajjin haala wal qabateen milkaaina kanan argadhes kanaaf tauu dandaa! Seera buuuraa Macaafa Qulqulluu wajjin wal simee jiraachuun koo caalaatti ilaalcha madaalamaa akkan qabaadhu na gargaareera. Amma anis tae maatiin koo isa duraa caalaa gammachuu qabna. Akkasumas, ogummaa Macaafa Qulqulluu keessa jiru namootatti himuun nu gammachiisa. Macaafa Qulqulluu qayyabachuun wantan hanga haraatti hojjedhe keessaa hojii isa guddaa dha. ˛
Dammaqaa! Amajjii-Bitootessa 2015 15
QAAMNI KANA TOLCHE JIRAA?
5 Lisa Dearing/Alamy
Fardi yeroo gulufutti wanta tau mee ilaali. Ribuun maashaa isaa inni dhifamuu dandau yeroo lukti fardichaa lafa tuqu humna walitti sassaaba; achii akkuma ispiriingii humna walitti qabate gadhiisuudhaan fardichi gara fuulduraatti akka darbatamu godha. Kana malees, yeroo fardi gulufutti lukni fardichaa yeroo muraasa keessatti sia baayee waan hurgufamuuf ribuun isaa miidhamuu ni dandaa. Haa tau malee, maashaaleen luka
Barruu kanaa ﬁ kanaan dura baan kaﬀaltii malee garagalfadhu
isaa keessa jiran hurgufama kana ni tasgabbeessu. Qorattoonni, akkaataan uumamaa kun “dizaayinii riibuu maashaa adda taee” ﬁ saﬃsaa ﬁ cimina qabaachuuf dandeessisu akka tae dubbatu. Injiinaroonni, roobootii luka afur qabu yeroo hojjetanitti diizaayinii luka fardaa kana fakkeessanii hojjechuuf yaalaa jiru. Haa tau malee, dhaabbanni teknoolojii Maasaachuuseetis keessatti argamuu ﬁ uumamatti fakkeesse roobootii hojjetu akka jedhetti, diizaayiniin luka fardaa kun baayee wal xaxaa waan taeef meeshaa ﬁ beekumsa injiinariingii yeroo haraa jirutti fayyadamanii fakkeessanii hojjechuun ulfaataa dha. Maal sitti fakkaata? Lukni fardaa jijjiirama tirannaatiin argamee? Moo qaamni tolche jira? ˛
Macaafni Qulqulluun Intarneetii irratti afaan 100 oliin argama
Weeb saayitii www.jw.org/om jedhamu ilaali ykn koodii kana dubbisiisi
g15 01-OA 141003
ARDI saaatii tokkotti kiilomeetira 50 gulufuu dandaa. Kun sochii qaamaa hedduu gochuu kan gaafatu taus, humni fardichi itti fayyadamu garuu muraasa jechuun ni dandaama. Kun tauu kan dandae akkamitti? Iccitiin isaa luka fardichaa wajjin kan wal qabate dha.
!"#2 A MA J J II-BIT OOT ESSA 2015 GAMMACHUU QABAACHUUF WANTOOTA BARBAACHISAN !"#2 M AX X ANSA KANA KEESSATTI s I NTAR NEETI I I R R AT T I ww...